﻿ चाख्नुभएको छ अरिंगालको परिकार ?
चाख्नुभएको छ अरिंगालको परिकार ?
सोमबार २०, असोज २०७६
म्याग्दी । अरिङ्गाल भन्ने बित्तिकै टोक्ने, चिल्ने सानो मौरीजस्तै जीव भनेर चिन्छौं । अरिंगाल खानको लागि पनि प्रयोग हुन्छ ले आफ्नो गोला लगाउने गर्दछ । मानिसहरु त्यही अरिङ्गालको गोला झारेर किरा खान्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
सामुदायिक वन जङ्गलमा पाइने अरिङ्गालको गोला पोलेर मानिसहरुले शहर बजारका होटलमा किरा बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका छन् । पछिल्लो समय म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा अरिङ्गालको व्यापारले तीव्रता पाएको छ ।
यस्ता अरिंगाल गाउँबाट युवाहरुले मानाको एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि १८ सय रुपैयाँसम्ममा बेच्छन् । बेनीका होटलहरुले किन्छन् र मसला मिसाई फ्राई गरेर प्रति प्लेट ६ सय रुपैयाँसम्ममा बेच्छन् । अरिङ्गालका पारखीहरु अरिङ्गाल खान भन्दै खोजीखोजी आउँछन् ।
खासगरी विदेश जानेहरु, विदेशबाट फर्किएका र शहर बजारमा बस्नेहरुले रुचाउँछन् । बेनीकी होटल सञ्चालिका सृजना भट्टचनका अनुसार अरिङ्गालको परिकार खाँदा मिठो हुने मात्रै होइन, यो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । अरिङ्गालको किरा तेल वा घ्युमा भुटेर खाएमा युरिक एसिड बढेको, प्रेसर–लो हुने, कब्जियत परेको, मेरुदण्ड दुख्ने र हातखुट्टा सुन्निने तथा चिसोका कारणबाट लागेको रोगहरु निको हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रदेश १ मा ५ हजार ७ सयको पीसीआर परीक्षण
उदयपुरमा डुबेको अवस्थामा ६९ बर्षीया वृद्धा मृत फेला
भेरीकै किनारमा अर्का युवकको शव फेला
बलिउड अभिनेता किरण कुमारले जिते कोरोना
इमरान खानले भारत छिमेकी देशकानिम्ति ‘खतरा’ भएको भन्दै गरे नेपालसँगको सिमा विवादको पनि चर्चा
धानको बिउ राख्दा किसानहरुले छुटाउनै नहुने कामहरु
भोलिदेखि बिर्तामोडको सिल खुल्ने
भारतीय मिडिया भन्छन्, ‘नेपालले फिर्ता लियो नक्सा’